USPS Has Begun Delivering Ballots - Somali | Multnomah County
USPS Has Begun Delivering Ballots - Somali
Arbaco, 17, Oktoobar 2018
Maraykanka Adeega Boostada Ayaa Bilaabay Gaynta Waraaqaha Cod-Bixinta Maanta, Arbacada, Oktoobar 17 Ee Doorashada Guud Ee Noofembar 6
Maraykanka Adeega Boostada Ayaa Bilaabay Dirista Waraaqaha Cod-Bixinta Maanta, Arbacada, Oktoobar 17 Ee Doorashada Gaarka Ah Ee Noofembar 6. Cod-bixiyayaasha Degmada Multnomah ee aan helin warqadda cod-bixinta Khamiista kahor, Oktoobar 25 waa inay ka wacaan xafiiska doorashada gobolka 503-988-3720.
Codbixiyayaasha waxay isku diiwaangelin karaan si ay ula socdaan codbixintooda una helaan dhejiska aan la taaban karin ee "Waan codeeyay". Fariin, iimayl, ama wargelin cod ah ayaa u sheegaya cod-bixiyeyaasha markii xafiiska doorashada gobolka ayay boosta soo dhigaan. Wargelinuhu waxay muujinayaan in warqadaha cod-bixinta la oggolaaday si loogu xisaabtamo ama haddii ay uga baahan tahay tallaabo kaloo uu qaado cod-bixiyaha. Cod-bixiyayaasha Degmada Multnomah waxay iska diiwaangalin karaan iyagoo booqanayamultnomah.ballottrax.net. Gudaha farriinta "Cod-bixinta la Aqbalay" cod-bixiyayaashu waxay heli doonaan istikarrada Oregon ee gaarka ah oo "Waan Codeeyay" ah oo diyaar u ah inay la wadaagaan warbaahinta bulshada. Istikarka "Waan Codeeyay" waxaa lagu heli karaa Ingiriisi iyo sagaal luuqadood oo kale. "Waan Codeeyay" waxay ku qoran tahay gudaha qaabka gobolka Oregon ee midabada calanka gobolka ee buluugga madow iyo dahabiga ah.
Doorashada Guud ee Noofeember 6, Doorashooyinka Degmada Multnomah waxay ka furi doonaan goobo dheeraad ah oo Gresham. Goobta Cod Bixinta Degdega ah waxay ka furnaan doontaa Oktoobar 22 - Noofambar 6 gudaha Dhismaha Bariga Degmada Multnomah ee 600 NE 8th Street. Cod-bixiyayaashu waxay awoodi doonaan inay baddalaan warqadaha cod-bixinta lumay, helaan kaalmo codaynta ah, su’aalo waydiiyaan, ama waxay iyaga oo socda iman karaan si ay u codeeyaan Goobta Cod Bixinta ee ku taala suuqa hoose ee Gresham.
Codbiyayaashu waxay iminka soo celin karaan waraaqaha cod bixinta sanduuqa cusub ee rasmiga ah ee codaynta ee Parkrose Neighborhood. Kani waa goob cusub ee cod bixin oo 24 saacadood oo ku taal MHCC Maywood Park Center ee NE 102nd ee meesha laga galayo baarkinka gawaadhida galbeedka, ee goobta ah 4390 NE 102nd Ave., Portland 97220. Warqadda cod-bixinta lagu codeeyey waxaa sidoo kale loo soo diri karaa xafiiska doorashooyinka iyadoo leh shaambadda boosta darajada koowaad ama iyadoo lagu rido goobta kasta oo rasmi ah oo lagu rido warqadaha cod-bixinta ee Oregon. Goobaha rasmiga ah ee lagu rido warqadaha cod-bixinta waxaa ka mid ah dhammaan goobaha Maktabadda Degmada Multnomah iyo sagaal goobood oo rasmiga ah oo lagu rido 24-ka saac. Si aad u hesho goobtaada rasmiga ah ee kuugu dhaw ee lagu rido waraaqaha cod-bixinta, booqo barta internetka ee bit.ly/MultCoDropSites.
Waraaqaha cod-bixinta waa in la helaa 8:00 GD Talaadada,Noofembar 6. Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Doorashada Guud ee Noofembar 6, fadlan booqo www.mcelections.org.